Isiokwu - Ọgụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
Megan Nwere ike 9, 2019 Ahapụ a Comment na Oranum.com Kupọns ego na koodu mgbasa ozi
Agụ ọgụgụ isi nwere ike ịbụ otu n'ime ahụmịhe kachasị mmụta ị ga-enwe. Ọ bụkwa ezigbo mmekọrịta, yabụ inwe nkasi obi na onye na-agụ ya dị mkpa. Na Oranum, ị nwere ike […]
Clubslọ ịgba chaa chaa ndị edekọtara n'okpuru na-enye Nkwụnye ego Na-achọghị "Ego Ego Ego", mgbe ị kwenyere ịnabata ezigbo ego ego. Gbalịa ka ị ghara ịnọchi ohere ịnwale […]
Enweghị ego nkwụnye ego 2019 Ọ dị mma ịsị na ị kwadebere ịmalite ịkụ nzọ? Ga-ebu ụzọ achọ ụgwọ ọrụ ịgba chaa chaa na-enweghị ụlọ ahịa. Ọ dịghị ezi ihe kpatara nrụgide, […]
Kwesighi ịnọ na nri pụrụ iche iji jikọọ na Mmụọ. Nwere ike jikọọ na Mmụọ mgbe a nnukwu Arizona Iced Tea, a Diet Coke and a […]
Mgbe a bịara n’ịzụlite ikike ime mmụọ, ọtụtụ mmadụ na-elekwasị anya n’ihe ha nwere ike ime iji mee ka ikike uche ha. Agbanyeghị, ọtụtụ na-eme ihe n'eziokwu, na-egbu oge […]
AJJ:: “TAA KWURU B TO B BE MYB MY M MB WITH N’EBUGH CO KW COF - - EBERE M N’ 9WA XNUMXAM. MGBE ahụ, M na-a ITụ ya, M Gụpụtara na kọlụm gị okwu ndị a […]
Alcoholism - Nduzi nke Metaphysical Iji gwọọ ọrịa
Megan March 11, 2017 Ahapụ a Comment na Alcoholism - Nduzi Metaphysical Na-agwọ
Ọtụtụ ndị m maara abụwo, ma ọ bụ na-a alcoholụ mmanya na-aba n'anya na ndụ. Ka oge na-aga, esi m iwe nke ndị aholicụrụma na-ewe m wee nabata m na to […]
Ama nke 1: Mmanya Mmanya Abụọ Na-eme Ka More Nwekwuo Uche Mgbe ọ bụla nụ banyere ndị mmadụ na mberede "na-ahụ" ihe ngwọta nke nsogbu mgbe ha na-atụrụ ndụ ma ghara itinye uche ha n'ọrụ na uche ha? […]
Ikike ime mmụọ na-akpọku anyị ka anyị mara mgbanwe mgbanwe aghụghọ na gburugburu ebe anyị na ihe anyị na-eburu n'amaghị ama karịa ihe anyị chere n'echiche anyị [
Ka ọ dị, ka m bụrụ onye izizi kwuru na nke a nwere ike B NOT B popular isiokwu na-ewu ewu. Ọ bụrụ na ị gụọ aha ma maa jijiji, ọ bụ ihe kwere nghọta. Otú ọ dị, ka anyị lee anya […]
Ọrụ mmụọ ma ọ bụ nke mmụọ abụghị naanị ịnọdụ ala n'oche gị, na imega ụfọdụ omume. M pụtara, ọ bụ maka ihe ndị a, mana ọ chọrọ ihe karịrị ịnọdụ ala. […]
E nwere ọdịiche dị iche n'etiti Premonition na Precognition; ọ bụ ezie na ụdị okike ndị a nwere ikike abụọ dị iche. Iji ghọta nke a obere mma, ka m apụ mbido […]
Ọ bụ eziokwu na-awụ akpata oyi n'ahụ ịchọpụta na n'ime ụlọ ọrụ ọgụgụ isi nke taa, n'ime mmadụ anọ ọ bụla na-akpọ onwe ha ndị na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi ma ọ bụ ndị na-ajụ ajụjụ, ma eleghị anya ọ bụ naanị otu […]
Kedụ ka mmadụ ga - esi chọta ezi mmụọ? Onu ogugu onu ogugu enwere ike site na ntughari. Okwu ọnụ, dị ka achọta ọ bụla ezi azụmahịa, bụ eleghị anya, ụzọ kasị mma nke ferreting […]
Emechara m na-ege ntị na mkparịta ụka nke otu nwoke nwere "ebe nchekwa foto". Ihe mchọpụtara na-amasị m banyere nkọwa ọ na-enye maka onyinye a / ikike a bụ na ọ bụ […]
Anyị natara ọtụtụ ntinye sitere n'aka ndị mmadụ na-eche ma ọ bụrụ na ha bụ mmụọ / ajụ ma ọ bụ schizophrenic. Nke a bụ ihe kwere nghọta tụlee otu nziputa nke isi mgbaka bụ ịnụ olu nke n'ezie ma psychics […]